Better Sales Strategist (မဟာဗျူဟာမြောက် အရောင်းပိုင်း စီမံခန့်ခွဲနိုင်ဖို့) - Better Version
July 24, 2020 2022-05-23 15:57
Module 1 : Clarity is King and Marketing Concepts
ဒီ module မှာဆိုရင် မန်နေဂျာတစ်ယောက်အနေနဲ့ကိုယ်လုပ်ရမယ့် လုပ်ငန်းတာဝန်တွေကို ရှင်းလင်းစွာသိသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Better Sales Strategist Course Introduction
About Sales Mastery Series
What are in the course for you?
Role and Responsibilities as A Sales Manager
Module 1 : Quizzes
BSS − Resources
BSS Modules – pdf
20 Questions to ask for buyer persona
Sales Strategy – Template
Five Forces Analysis – Template
Module2: Understanding Different Characteristic of Markets
မှန်ကန်ထိရောက်တဲ့ အရောင်းမဟာဗျူဟာချမှတ်ဖို့ မတူညီတဲ့ဈေးကွက်သဘောတရားတွေကို နားလည်အောင် ဒီ သင်ခန်းစာမှာလေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဝယ်သူတွေရဲ့ မတူညီတဲ့ဝယ်ယူပုံစံတွေ၊ ဝယ်ဖို့ ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်ချကြသလဲ၊ ဘယ်အရာတွေက လွှမ်းမိုးနေသလဲ ဆိုတာတွေကိုပါ သိရှိနားလည်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
Understanding Differences of Markets
When Customers gets Satisfaction
Factors Influencing on Consumer Decision Making Process
Steps of Customer Decision Making Process
Organizational Buying Behaviors
Module2: Understanding Different Characteristic of Markets Powerpoint Pdf
Module2: Quizzes
Forecasting & Best Practices.pptx
Module3: Sales Strategy : Concepts
အရောင်းနည်းဗျူဟာတွေ ချမှတ်တဲ့အခါ ဘာတွေ ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်လဲ။ ဘာတွေကို လေ့လာသုံးသပ်ရမလဲ ဆိုတဲ့ အရေးပါတဲ့ concept တွေကို ဒီ course မှာ ရှင်းပြပေးသွားမှာပါ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ကိုယ်ရောင်းနေတဲ့ ကုန်ပစ္စည်းအတွက် မှန်ကန်တဲ့ ဈေးကွက်ရွေးချယ်တတ်ဖို့ နဲ့ နားလည်ထားဖို့ လိုအပ်တဲ့ product life cycle အကြောင်း ကိုလည်း သိရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
Product – Market Growth Strategies
BCG Portfolio (Allocating Your Resources)
Key Decision for Sales Strategy
Modules3: Quizzes
Module4: Sales Strategy : Planning Process
စနစ်ကျတဲ့ Sales plan တစ်ခုမှာ ဘယ်အချက်တွေပါသင့်သလဲ။ ဈေးကွက်တွေ၊ ပြိုင်ဘက်တွေနဲ့ ကိုယ့်လုပ်ငန်းအားနည်းချက်၊ အားသာချက်ကို သုံးသပ်တတ်သွားပြီး မှန်ကန်တဲ့ strategy ကိုချမှတ်တတ်သွားမယ်။ ဒါ့အပြင် အရောင်းရနိုင်ချေ ခန့်မှန်းတဲ့နည်းလမ်းတွေ၊ အရောင်းအဖွဲ့အတွက် အသုံးစရိတ် Sales Budget သတ်မှတ်တဲ့ ပုံစံတွေကိုပါ နားလည်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
Hierarchy of Sales Plan
Components of Sales Plan
PESTEL Analysis – Generating Strategy
SWOT Analysis – Generating Strategy
Which concepts are important?
Module4: Quizzes
Module5: Sales Strategy : Sales Program
အရောင်းဗျူဟာချမှတ်ပြီးရင် လိုအပ်တဲ့ ဈေးနှုန်းသတ်မှတ်နည်းတွေ၊ ဖြန့်ဖြူးရောင်းချနည်းတွေ၊ လက်တွေ့ သုံးလို့ရမယ့် promotion နည်းလမ်းတွေကိုပါ သိသွားဖို့ အတွက် ဒီ module ကိုအဆုံးထိ လေ့လာပါ။
Introduction of Sales Program
Relationship between Selling and Advertising
Action and Control Plan
Module5: Quizzes
11 questions01 hour
Module6: Key Account Management and Relationship Selling
Key Account Management ဆိုတာ ကိုယ့်လုပ်ငန်းအတွက် အရေးပါတဲ့ ဝယ်သူတွေ၊ ရောင်းအားအများကြီးပေးတဲ့ လက်ကြီး ဝယ်သူ၊ ဖောက်သည်တွေနဲ့ ရေရှည်ဆက်ဆံရေးတည်ဆောက်တာဖြစ်ပါတယ်။ Key Account Management နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ဘာတွေ လိုအပ်လဲ? ဘာတွေ သိထားရမလဲ? ဘယ်လို ရေရှည်ဆက်ဆံရေး တည်ဆောက်ရမလဲ အသေးစိတ်ပြောပြ ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
Key Account Management Criteria and Decision
Stage of KAM
Necessary Skills for KAM
Advantages and Danger of KAM
Building Relationship with KAM
Handling Relationship with KAM
Module6: Quizzes
Better Sales Strategist အတန်းတက်ရောက်ပြီးသူများအတွက်
Business Modeling & Development